प्रदीप र केकीका साथ नरेशको भनाभन « Kamana
प्रदीप र केकीका साथ नरेशको भनाभन
सम्मानबाटै कार्यक्रमको थालनी गर्ने कामना फिल्म अवार्डस् २०७५ मा मह जोडी र शम्भुजित बासकोटालाई सम्मान अर्पण गरिएपश्चात् प्रस्तुत मेड्लेले सबैको मन जित्यो । त्यसबारे प्रकाश पार्दै मञ्चमा देखिए सञ्चारकर्मी तथा उद्घोषक नरेश भट्टराई । उनी मञ्चमा आएका थिए बाँकी समारोह अगाडि बढाउन ।
भट्टराई कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका थिए । ‘वाउ ! यस्तो पो प्रस्तुति । सम्मानित व्यक्तित्वको सम्मानमा एउटा शानदार प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत थियो’ नरेशले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा केही विधाका अवार्ड प्रदान गर्ने तथा विभिन्न प्रस्तुतिका लागि उद्घोषण गरे । यसै क्रममा उनले जानकारी गराए ‘समारोहमा यस्तो प्रस्तुति अरु पनि छन् । जसका लागि तयार हुनुहुन्छ नेपाली फिल्मकी प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्द थापा, चैत्यदेवी, भुवन केसी, झरना थापा ।’ उनले नेपाली फिल्म क्षेत्रको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कलाकार समारोहमा शानदार प्रस्तुतिका साथ देखिने जानकारी गराउँदै ती क्रमशः लगातार ती कलाकारको नाम लिँदै गए ।
दर्शकदीर्घामा खासखुस चल्न थाल्यो । दर्शकदीर्घामै रहेका नायक–नायिका प्रदीप खड्का र केकी अधिकारीको खासखुसमा नरेशको ध्यान गइरहेको थियो । नरेशले मञ्चबाटै उनीहरुप्रति कमेन्ट गरे ‘प्रदीप, केकी केको खासखुस हो ? मैले अघिदेखि नै हेरिरहेको छु। त्यहाँ खासखुस चलिरहेको छ । के प्रब्लम हो ?’ नरेशले प्राविधिकलाई सम्बोधन गर्दै भने ‘कृपया प्रदीप र केकीलाई माइक्रोफोन दिनुहोला ।’ माइक्रोफोन पाएपछि प्रदीपले भने– ‘केही होइन, केही होइन सरी ।’ नरेशले बारम्बार सोधिरहेपछि प्रदीपले भनिदिए– ‘तपाईंले पर्फमेन्स गर्ने कलाकार सबैको नाम पहिले नै भन्दिनुभयो ।
क्लाइमेक्स नै पहिल्यै भनिदिएपछि केको सरप्राइज ?’ केकीले पनि सही थापिन्– ‘प्रदीपको स्टार इन्ट्री हान्ने कुरा थियो, तपाईंले पहिले नै नाम भनिदिनुभयो । अब त्यो मजा त हरायो नि ?’ नरेश, प्रदीप र केकी विवाद र सवाल जवाफमा उत्रिन थाले । नरेशले आपत्ती जनाउँदै भने– ‘मैले यत्रो सिनियर कलाकारहरुको नाम लिएँ । कसैलाई केही आपत्ती भएन प्रदीप र केकीलाईचाहिँ किन आपत्ती हँ ? मैले त अट्रयाक्सनको कुरा गरिरहेको थिएँ ।’ सवाल जवाफ अगाडि बढ्दै जाँदा नरेश बम्किए– ‘ल ठीकै छ म कार्यक्रम चलाउन नजान्ने रहेछु, अबको कार्यक्रम प्रदीप र केकीले नै चलाऊन् । सरी मचाहिँ लागेँ । मेरो पनि पालो आउला नि, मैले जान्या छु।’
‘फस्यो केटो फस्यो’ केकीले प्रदीपलाई भनिन् । प्रदीपले भने सामान्यरुपमा लिँदै भने– ‘केही फरक पर्दैन । सायद नरेश दाइलाई थाहा रहेनछ, म पहिले एंकर बन्न आको भनेर । ल ठीकै छ, अब हामी स्टेजतिरै जाऔं ।’ प्रदीप र केकी दर्शकदीर्घाबाट गफिँदै मञ्चतिर लागे, भने– ‘सबैजना कामना कामना भनिरा हुन्छन् । यो कामनाचाहिँ को रहेछ हेर्नलाई स्टेजमा चढेको, स्टेजबाट चाहिँ देखिन्छ कि भनेर ।’ केकी भन्दै थिइन्– ‘ए तिमी कामना हेर्न पो स्टेज चढेको ? कामना आज मात्र ३५ वर्ष टेकेकी छिन्, अनि तिम्रोचाहिँ एज ?’ प्रदीपले जवाफ फर्काइहाले– ‘ए, त्यही ९÷१० वर्षको ग्याप त रहेछ नि । फेरि आजभोलि त यस्तै चलन आएको छ ।’ प्रदीपले स्टेज आफूहरु जस्तो सुपरस्टारका लागि भएको बताउँदा केकीले प्रदीपको फ्लप फिल्म रोजको बारेमा पनि थाहा पाएको भन्दै फ्लप क्लबमा स्वागत गरिन् । ‘फिल्म फ्लप भएर के भयो त यसको गीत त करोड क्लबमा पुगेको थियो क्यारे ।’ –प्रदीप र केकी आफैलाई व्यंग्य गरेर फिल्म क्षेत्रको प्रवृत्ति उजागर गर्न थाले । प्रदीपले यसो भन्दा केकीले भनिन्– ‘मैले फिल्म कोहलपुर एक्सप्रेसका लागि करोड क्लबको केक काट्या जस्तै ?’ प्रदीप खुले– ‘वास्तवमा म पनि कन्फ्युज थिएँ रोज आएको हो कि गएको भनेर । तर जब ठग्स अफ हिन्दुस्तान आयो र गयो म पनि ढुक्क भएँ ।’
प्रदीप र केकीले ठट्यौलीका साथ अवार्ड प्रदान समारोहलाई पनि अगाडि बढाइरहेका थिए । उनीहरुले सरोज खनालको एक मार्किक प्रस्तुतिका लागि समेत उद्घोषण गरे । त्यसपछि प्रदीप र केकी गफिन थाले । ‘तिमी पनि नोमिनेसनमा छौ प्रदीप ?’ केकीको प्रश्नमा प्रदीपको गुनासो थियो– ‘म हरेक वर्ष नोमिनेसनमा हुन्छुनि ? तर अवार्ड अहिलेसम्म पाको होइन ।’ केकीले थपिन्– ‘ओ माई गड ? प्रोग्राम होस्ट गरेको हिसाबले अनि यति धेरै चम्किएको हिसाबले अवार्ड पाउने पक्का भइसक्या हो कि क्या हो ?’ प्रदीपले भने– ‘कामनाको कभरमा पनि आको थिएँ, आउन त ?’ केकीले पेलिन्– ‘अवार्ड पाउने पक्का रैछ, त्यही भएर यति धेरै चम्किएको रैछ के प्रदीप ?’ प्रदीपले भने गफ दिए– ‘युनो ह्वाट ? इफ युआस्क मी, अवार्ड पाउने भए आउने, नपाउने भए नआउने अथवा नाच्यो भने अवार्ड पाउने, आई डन्ट विलिभ इन दिस । टप फाइभमा पर्नु भनेकै ठूलो कुरा हो क्या ?’
यस्तै कुरा गरिरहेका बेला पछाडि स्क्रिनमा उनीहरुको एक भिडियो देखापर्छ । त्यहाँ प्रदीप र केकी सोही अवार्ड समारोह सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको र एक आपसमा गफिइरहेको देखिन्छन् । ‘तिमी पनि बेस्ट एक्टरको मनोनयनमा छौ रे । कामनाबाट फोन आयो होला अवार्ड कसले जित्छ भनेर तिमीले के भन्यौ नि ?’ –भिडियोमा केकी प्रदीपलाई सोध्छिन् । ‘मैले त मनोनयनमा पर्नुनै ठूलो कुरा हो भन्दिएँ । इन्डस्ट्रीको सबैले भन्ने एन्सर जस्तै ? थाहा छ तिमीलाई म सधैं नोमिनेसनमा पर्छु, तर अवार्ड लिएको छैन, बाँड्दिनुभन्ने गरेको छु।
तर यसपालिचाहिँ लिऊँकी भन्ने लागिरा’छ ।’ प्रदीप गफमाथि गफ दिइरहेका थिए– ‘तिमीलाई थाहा छ म वर्षमा किन कम फिल्म खेल्छु? मैले वर्षमा ५ वटा फिल्म खेलें भने सबैबाट नोमिनेसनमा पर्छु । त्यस्तो भयो भने त फेरि अरुले चान्स नै पाउँदैन । हेर्ने नै हो भनेचाहिँ यसपालि मैले नै अवार्ड पाउनुपर्छ । किनभने यो वर्षको सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म छक्का पञ्जा हैन ? त्यसले १५/१६ करोड कमायो । यो वर्ष मेरो प्रेम गीत २ र लिली बिली गरेर दुईटा फिल्म रिलिज भयो । प्रेम गीत २ ले ९/१० करोड र लिली बिलीले ७/८ करोड व्यापार गरिहाल्यो । यो जोेड्दा छक्का पञ्जालाई पनि जितिदियो । यत्रो विजनेस गर्ने म सिंगल एक्टर हुँ । हिरोइन पनि नयाँ नयाँ थिए । त्यही भएर अवार्ड पाउने त मैले नै हो नि ।’
केही समयअगाडि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा ‘नोमिनेशनमा पर्नु नै ठुलो कुरा’ भनिरहेका प्रदीप भिडियो बजेसँगै तर्सिरहेका थिए । रेकर्डेड भिडियोमा भने उनी केकीलाई सोधिरहेका थिए ‘बाइ द वे तिम्रो त फिल्म हिट नभए पनि अवार्ड त पाईरहन्छौ । कस्तो फिल हुँदोरहेछ हँ ?’ शुरुमा केही रिसाएकी केकीले दिएको जवाफ भिडियोमै देखियो ‘एकदम हिट फिल्म दिनेहरुले अवार्ड नपाउँदा जस्तो फिल हुन्छ नि, मलाई अवार्ड पाउँदा त्यस्तै फिल हुन्छ ।’ गत वर्ष लक्स कामना फिल्म अवार्डस्अन्र्तगतको लक्स पपुलर च्वाईस अवार्ड चुमेकी केकीले यस वर्षको लक्स स्टार अफ द ईएर आफैले जित्ने पक्का भएको बताईरहेकी थिईन् । ‘त्यसको एउटा गीतमात्र हिट हो । मलाई डर भनेको अलि अलि प्रियंकासँग हो, तर आई थिंक प्रियंका सुटिङमा छ । सो पर्फम गर्न पनि नभ्याउला । सो यसपालीको स्टार अफ द इयर पनि मैले नै पाउँछु।’ उनी यसो भनेर खुशी हुँदा नहुँदै प्रदीपले बिचैमा भने ‘तिमी त नोमिशनमा पनि छैनौ ।’ केकी ह्वाट भन्दै रिसाउँदै थिइन् । भिडियोमा देखियो । त्यही बेला केकी र प्रदीपले कसैले भिडियो खिचेको चालल पाए र भने ‘यहाँ रिहर्सल भईरा बेला खिच्ने हो ? बाहिर जानु?’
भिडियो सकियो । नरेश भट्टराई अचानक फेरि स्टेजमा देखिए । केकीले भन्दै थिइन् ‘त्यो म हैन है, म जस्तै देखिने कोही अर्कै मान्छे हो । ’ नरेशले फर्काए ‘चोरको खुट्टा काट भनेको यही हो ।’ प्रदीप र केकी आफ्नो सफाई दिँदै मञ्चबाट बाहिरीउपछि समरोहलाई फेरि नरेशले नै अगाडि बढाए । नरेश, प्रदीप र केकीबिचको यी सवाल जवाफ फिल्म क्षेत्रमा देखिने द्धैध चरित्रको वास्तविक प्रतिक थियो । जसलाई उनीहरुले रोकरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।